Ukuhweba kwe-ECN Forex | Zuza ku-ECN / STP Forex Trading ne-FXCC
Ikhaya / Mayelana / Mayelana ne-FXCC / Isibonelo sethu seBhizinisi
Njengomthengisi we-ECX forex FXCC unayo Ayikho Idokhumenti Yokusebenza. Imodeli yethu yebhizinisi isekelwe ku-Straight Through Processing (STP) kwinethiwekhi ehlelwe yi-elekthronikhi, sikhuluma kulokhu njengendlela yethu yokuhweba ye-ECN / STP FX. Imodeli yokuhweba ye-ECN / STP yindawo lapho yonke imiyalo yamakhasimende ethu ithunyelwa ezikhungweni zemali ezikhuphisanayo nezifanelekayo, ukuze zifaniswe. Leli gumbi elihloniphekile lezikhungo ezihlonishwayo lidala i-pool yethu yabahlinzeki bamakhemikhali. Lokhu ngokuqondile, ngokuqondile ukucubungula, kuqeda amandla okuba yiziphi izintengo noma ukusabalalisa izinyathelo, kuyilapho kuqinisekiswa ukuthi akukaze kube khona ukuphikisana kwezintshisekelo phakathi kweFXCC njengomthengisi kanye namakhasimende ethu.
I-FXCC ikholelwa ukuthi ukuba ne-multiple supply providers ingenye yezinsizakalo eziyisisekelo esingayinika amaklayenti ethu emakethe ye-forex ekhulayo. Ngenxa yalokho sakha ubuhlobo obuqinile nabaningi kakhulu: izikhungo zezezimali zomhlaba eziqinisekisiwe, ezihlonishwayo nezihlonziwe, ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende ethu athola inzuzo kakhulu forex ukuncintisana isakazeka i-24-5 etholakalayo, ngisho nangesikhathi sezimakethe ezimakethe futhi lapho kukhishwa idatha ebalulekile kanye nokukhishwa kwezindaba.
I-FXCC Price Aggregator njalo futhi ihlola ngokuzenzakalelayo yonke ibhidi / Buza (ukuthenga nokuthengisa) amanani angena kithi Uhlelo lwe-ECN futhi ihlale ibonisa ukuhlanganiswa kwentengo engcono kunikezwa yibo bonke abahlinzeki bethu bezezimali. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu azuzwa kumdlalo omuhle we-Bid / Ask amanani atholakala kithi forex yokuhweba uhlelo. Le ndlela yokwenza imali idala imvelo yobuchwepheshe kubathengi noma yikuphi izinga labo lokuhlangenwe nakho futhi inikezela ububanzi obuningi bokuhweba okunenzuzo.
Isifinyezo somfanekiso wokuhweba we-FXCC.
I-FXCC inikeza amaklayenti ayo ukufinyelela okuqondile kumodeli we-forex we-forex oketshezi, lapho wonke amaklayenti athola khona ukufinyelela okufanayo, ezimakethe ezifanayo zamanzi, lapho ukuhweba kwenziwa khona ngesikhathi esisodwa, ngaphandle kokubambezeleka, noma ukucaphuna kabusha.
Ngokungafani nokuthengiswa kwama-Dek brokers, i-FXCC ayithathi kolunye uhlangothi lwabahwebi bamakhasimende. Asazi ukuhweba ngokumelene neklayenti: ama-oda, ukuyeka noma imikhawulo nabo bonke abathengisa amaklayenti babuyiselwa emuva emuva ngqo namaqembu aphikisanayo emithonjeni yethu yabahlinzeki bamakhemikhali.
Ukuhweba ngokusebenzisa imodeli yethu ye-ECN / STP ehlala engaziwa, abahlinzeki bethu be-liquidity babona kuphela ama-oda avela ngaphakathi kohlelo lwe-FXCC.
Ithuba lokuyeka ukulahlekelwa ukuzingela, noma ukusabalalisa ukukhula liqedwa.
NjengeDiski Engenzi Ukusebenza ngaphambilini, kodwa akakho ukungqubuzana nentshisekelo kumakhasimende ethu. Asikho isidingo sokuba sihlasele, ngakho-ke asikho isilingo kithi sokuhweba ngamakhasimende ethu.
Amanani okungafani nokusabalalisa kwe-forex kusakazeka.
Ukuhlinzeka ngamapulatifomu okuhweba kakhulu okuthengiswayo.
Lapha ku-FXCC sikholelwa ukuthi amaklayenti ethu kufanele abe nawo wonke Amathuluzi okuhweba okuphambili Abahwebi abaphumelelayo badinga ukuthi bayakwazi. Isibonelo, sinikeza amaklayenti ethu we-forex ukufinyelela Isofthiwe ye-forex ye-MetaTrader 4.
Ibhuloho yethu ye-ECN yokuthengisa ivumela ukuthi sinikeze amaklayenti, ajwayele i-MetaTrader, inketho yokuqhubeka isebenzisa abathandayo forex yokuhweba platform esimweni se-ECN / STP.